Ekoatora: Ny hiaka ho amin’ny fahaleovantena roanjato taona lasa izay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2009 18:28 GMT
Tamin'ny 9 Aogositra 1809, nisy andian-dehilahy tany Quito, izay ny Repoblikan'ny Ekoatora amin'izao fotoana, nandray anjara tao anatin'ny “Hiaka voalohan'i Amerika Latina.” Ity hetsika ity dia hiaka fitakiana fahaleovantena hiala ambany vahohon'ny mpanjaka Espaniola ary mpialoha lalana ireo maro hafa nanerana ny faritra nataon'ireo mpitaky fahaleovantena toy ity. Na dia tsy nahazo fahaleovantena tanteraka aza i Ekoatora hatramin'ny 1822, dia nanampy tamin'ny fanombohana ny Ady ho amin'ny Fahaleovantenan'i Ekoatora ity hiaka ity. Tamin'ity taona ity, nankalaza ny faha roanjato taona ho fahatsiarovana ity hetsika ity izay nitranga tamin'ny 200 taona lasa tany i Ekoatora.
Sarin'i Quito, Ekoatora avy amin'i L. Marcio Ramalho ary ampiasana ny Creative Commons license.
Iray amn'ireo lehilahy, izay nanampy tamin'ny fitarihana ny hetsika i Eugenio Espejo, izay nampiasa ny toerana misy azy mba hanaovana ity dingana ity ho amin'ny hoavin'ny Amerika-Latina, ary tanteraka ireo nofiny tamin'ny mangiran-dratsin'ny 10 Aogositra 1809. Manoratra momba ny anjara toeran'i Espejo amin'ny zotra mankany amin'ny fahaleovantena i Belén Proaño of Temas Para Debatir [es]:
Ireo hevitr'i Espejo no teboka niaingana ho amin'ny fijery vaovao ny noraisina ho toy ny Reny-malala, hoy ilay mpahay tantara Jorge Nuñez, ilay nanoratra ny boky Eugenio Espejo sy ny Eritreritra ho an'ilay Mpisava làlana ho amin'ny Fahaleovantena. “Izay no niatombohan'ny fieritreretana an'i Quito ho Reny-malala fa tsy i Espana intsony. Teraka ny fahatsiarovana tena amin'ny hoe ho lasa inona ny firenena Ekoatorianina atsy aoriana atsy.”
Ny alin'ny 9 Aogositra, nisy fihetsiketsehana goavana iray nanerana ny tanànan'i Quito, ary maro ireo nizotra ho any amin'ny “Efitranon'ny fanoherana” izay notantanan'i Doña Manuela Cañizares. Ny ampitson'iny, maro tamin'ireo olom-baventy tao Quito tamin'ny fotoan'andro, no nivondrona ary namorona Komitin'ny fiandrianan'ny Governemanta ary nifidy ireo manampahefana hiasa ao. Taorina kely, tamin'ny 16 Aogositra 1809, nisy fivoriambe natao ary nosoniavina ny antontan-taratasy voalohany milaza ny fahaleovantenan'i Quito.
Taorian'ny firohotana voalohany, ny tanàna'i Quito dia nomena ny anaram-bositra hoe “Luz de América” na (Ny Hazavan'i Amerika) ary nanjary fakan-tahaka ho an'ireo vahoaka hafa mangetaheta fahaleovantena. Nanoritra ny làlana i Quito ary nanaraka kosa ireo Amerikanina ambiny. Ny blaogy Brigada Quetzalcoalt [es] koa dia manolotra tatitra mikasika ity datin'andro ity any Bolivia, firenena izay mankalaza ihany koa ny faha-roanjato taonan'ny hiaka ho amin'ny fahaleovantenany manokana.
Manaraka ny ohatra navelan'i Quito, ny tanànan'i Caracas dia nihiaka ho amin'ny fahaleovantena tamin'ny 18 Aprily 1810, Buenos Aires tamin'ny 25 May, Bogotá tamin'ny 20 Jolay, Mexico tamin'ny 16th Septambra, ary Santiago de Chile tamin'ny 18 May. Nandrehitra afo nanerana ny koantinanta Amerikanina manontolo ny mponin'i Quito.